मध्यपश्चिममा पेट्रोलियम खपत तीन गुणाले वृद्धि - नेपालबहस
गृहपृष्ठ अर्थ/व्यापार मध्यपश्चिममा पेट्रोलियम खपत तीन गुणाले वृद्धि
२४ असोज, बाँके । पछिल्ला पाँच वर्षमा साविकको मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल आयल निगम नेपालगञ्ज डिपोका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत झण्डै तीन गुणाले बढेको छ ।
“इन्धन क्षेत्र आयातमुखी र खपत उन्मुख भएका कारण मट्टितेलबाहेक पेट्रोलियम पदार्थको वृद्धिदर उच्च भएको छ । आर्थिक गतिविधि र विकासका काम बढेका छन्, सवारी आयातमा उच्च वृद्धि भएको छ, हामीसँग भने पेट्रोलियमको कुनै स्रोत छैन । त्यसैले पनि खपत दर उच्चरूपमा बढेको छ”, डिपो प्रमुख पोखरेलले भने ।
“मट्टितेललाई घटाएर पेट्रोलको भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ”, डिपो प्रमुख पोखरेलले भने, “पेट्रोल भण्डारण क्षमता विस्तार नगर्ने हो भने हालको भण्डारणले माग धान्न पनि धौधौ पर्नेछ । त्यसका लागि भण्डारण क्षमता विस्तार अत्यावश्यक नै रहेको छ । त्यो प्रक्रिया शुरु भइसक्यो ।”
मट्टितेलको खपत न्यून भएपछि निगमले मट्टितेल भण्डारण गर्ने ट्याङ्कीलाई पेट्रोल ट्याङ्कीमा स्थानान्तरण गर्न शुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ । डिपो प्रमुख पोखरेलले भने, “अब मट्टितेललाई पेट्रोलमा स्थानान्तरण गरिएपछि करीब १० दिनसम्म पुग्ने पेट्रोल भण्डारण हुनेछ ।” मट्टितेलको माग घट्दै गएपछि मट्टितेल बोक्ने ट्याङ्कर पनि पेट्रोलमा रूपान्तरण हुनेछन् ।
निगमका अनुसार छुट्टै पेट्रोल ट्ययाङ्की राख्न धेरै रकम आवश्यक पर्ने भएपछि कम लागतमा मट्टितेल ट्याङ्कीलाई पेट्रोल ट्याङ्कीमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । पेट्रोल भण्डारण क्षमता बढेपछि उपभोक्ताका लागि अझै सहजरूपमा इन्धन आपूर्ति गर्न सकिने डिपो प्रमुख पोखरेलले बताए ।
“अहिले मट्टितेलभन्दा पेट्रोलको माग निकै बढ्दो क्रममा रहेको छ”, उनले भने, “सवारीको चापलाई समेत मध्यनजर गरेर निगमले पेट्रोल भण्डारण क्षमता विस्तार शुरु गरेको हो ।” हाल नेपालगञ्ज डिपोमा डिजेल दुई हजार २८० किलोलिटर, हवाई इन्धन २८० किलोलिटर भण्डार गर्ने क्षमताका ट्याङ्की रहेका छन् ।
अघिल्लो लेखराष्ट्रिय क्रिकेट टिम आज स्वदेश फर्कदै
अर्को लेखप्रहरी बुलेटिन : बिहीबार कहाँ के भयो ? [थाहा पाउनुस]
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि फिर्ता लिन नेविसंघको माग, नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी
खाद्यले भन्यो, ९२ हजार मेट्रिक टन चामल मौज्दात छ, ढुक्क हुनुस !
कोरोनाका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत